ဤလေ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်တမ်းသည် ကမ္ဘ္ဘာတစ်ဝှမ်း သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွင်းအလုပ်လုပ်နေသောလူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤလေ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်သည် အီးယူရန်ပုံငွေ တစ် ကမ်ဘာလုံးရှိသုတေသနနှင့်ဆန်သစ်တီထွင်မှုကွန်ယက်အဖွဲ့ မှ ကမ်ဘာတလွှားရှိ ကွဲပြားခြားနားနေကြသောသုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအခင်းအကျင်းတွင် ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များကိုထူထောင်ကြရန် စူးစမ်းရှာဖွေသော RRING စီမံကိန်းကြီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ RRING သည် ယူနစ်ကိုနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှ အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ကြသော သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ ရှုထောင့်များအား နားထောင်ချင်သောကြောင့်ဤလေ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ဒီစာတမ်းတွင်ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမူဝါဒ နှင့် နိုင်ငံတကာချဉ်းကပ်မှုများရဲ့တိုးတက်မှုများသည် သင့်ရဲ့အမှန်တပယ်အခြေအနေများကိုတိုးတက်စေရန်အလေ့အကျင့်ပေးမှုအတွက်အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်ဖြေဆိုထားသောအချိန်များကို ကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့် (အခမဲ့ iPad mini တစ်ဆု မဲနိုက်ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆ ဆုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အချိန် ၃၀-၄၅ မိနစ်ခန့် ကြာမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အား ပထမဆုံးအနေဖြင့် သင့်ရဲ့လူမှုရေးနောက်ခံကိုနားလည်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး လူဦးရေဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို မေးပါမည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သင်သည် အထိုက်အလျှောက်သဘောတူရန်နှင့် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်ဆိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသော အပြုအမူတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ စာတမ်းကို ကုလသမဂစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များပေါ်တွင် သင်ရဲ့အမြင်များဖြင့် ကောက်ချက်ချ အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုများကို လုံးဝလျို့ဝှက်ထားပါမည်။ သင့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်များသာသုတေသနအတွက်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ချပေးပါ။ သင့်ရဲ့အထောက်အထားများကို ပြည်သူများသိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်ထိုအချက်အလက်များကို စီးပွါးဖြစ်အသုံးပြုခြင်းများအတွက် တတိယပါတီနှင့်အတူ ဘယ်တော့မှ ဝေမျှမည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ပါဝင်မှုသည် မိမိအလိုဆနအလျှောက်သာဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်စစ်တမ်းကောက်နေစဉ်ကာလအတွင်းမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ဖြစ်စေ ဆုတ်ခွာခွင့်ရှိပါသည်။ မေးခွန်းများကို မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်မဆို ကျော်လွှားနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ဤလေ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်တမ်းသည် ကမ်ဘာတစ်ဝှမ်း သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွင်းအလုပ်လုပ်နေသောလူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤလေ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်သည် အီးယူရန်ပုံငွေ တစ် ကမ်ဘာလုံးရှိသုတေသနနှင့်ဆန်သစ်တီထွင်မှုကွန်ယက်အဖွဲ့ မှ ကမ်ဘာတလွှားရှိ ကွဲပြားခြားနားနေကြသောသုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအခင်းအကျင်းတွင် ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များကိုထူထောင်ကြရန် စူးစမ်းရှာဖွေသော RRING စီမံကိန်းကြီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ RRING သည် ယူနစ်ကိုနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှ အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ကြသော သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါသည်။
ထိုစီမံကိန်သည် ထောက်ပံ့ငွေသဘောတူညီချက် No 788503 အောက် ဥရောပသမဂရဲ့ European Union’s Horizon 2020 သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အစီအစဉ်ရန်ပုံငွေမှ လက်ခံရရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အသက် ၁၈ နှစ် (သို့မဟုတ်) ၁၈နှစ်အထက်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပေးပါ။
ကျွန်ုပ်အေကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များသည်လှျို့ဝှက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုနားလည်ပါသည်။ တတိယပါတီ၏စီးပွါးရေးအဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သဘောတူညီချက်မပါဘဲ လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီလေ့လာဆန်းစစ်မှုစစ်တမ်းရဲ့အဆုံးမှာ ကျွန်ုပ်၏ အမည်နှင့်(ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်) ပုဂဂိုလ်ရေးအရ သတင်းအချက်အလက်များကို RRING သို့ပေးလိမ့်မည်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည့် မည်သည့်အချိန်တွင် မဆို ငါ့အခွင့်ပြုချက်ပြန်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ် ထောက်ပံ့အချက်အလက်အားလုံးကို ပယ်ဖျက် နိုင်သည်ကို နားလည်ပါသည်။ ထို့ပြင်ဤအချက်အလက် များသည် ကျွန်ုပ် မပေးလျှင် ကျွန်ုပ် ၏ ဖြေကြားထားသော တုံ့ပြန်မှု အဓိပပါယ် ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု နားလည်ပါသည်။
ဒီသုတေသနလုပ်ငန်း၌ကျန်ုပ် ပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးလုံလောက်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိခြင်း နှင့် ကျွန်ုပ်ပေးသော သတင်းအချက်အလက်များမှ မည်သို့ဖြစ်မည်ကို နားလည်သဘောတူသည်။
ဒီသုတေသနလုပ်ငန်း၌ ကျွန်ုပ် ပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးလုံလောက်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိခြင်း နှင့် ကျွန်ုပ်ပေးသော သတင်းအချက်အလက်များမှ မည်သို့ဖြစ်မည်ကို နားလည်သဘောတူသည်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် သတင်းအချက်အလက် များကို သဘောတူညီပြီး ထိုသုတေသန စစ်တမ်း၏ အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိပါသည်။
ဤလေ့လာမှု၊ ဆန်းစစ်မှုနှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ survey@qualiaanalytics.org. ။ ဤသုတေသန စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါက rring.eu@gmail.com ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။.
အထက်ဖော်ပြပါ ထုတ်ပြန်ချက်များကို သဘောမတူလျှင် သင်စစ်တမ်းနှင့်အတူ ရှေ့ဆက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင့်ရဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထိုသုတေသနသည် (qualiaanalytics.org), ဗြိတိန်ရဲ့ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာ ရုံး(ICO) နှင့်အတူမှတ်ပုံတင် ခြင်း နှင့်အီးယူအထွေထွေ ဒေတာများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စည်းမျဉ်း ဥပဒေ (GDPR ) နှင့်အတူ အပြည့်အဝလိုက်နာပါသည် ။ ဒေတာများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စည်းမျဉ်းဥပဒေ (GDPR) ။ သီးသန့် privacy မူဝါဒကို မြင်နိုင်ပါသည်။.
ဖြေကြားရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက Next ကို နှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့ကိုကူညီရန်အသင်၏ပုဂဂိုလ်ရေးနောက်ခံ မေးခွန်းများမေးခြင်းဖြင့်စတင်ဖို့ မည်ဖြစ်ပါသည်။ တတ်နိုင်သမျှဖြေဆိုရန်နှင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလှျို့ဝှက်ဆက်လက်ထားရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ကို ဘယ်နှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါသလဲ။
သင်သည် တစ်ခုထက်ပိုရှိပါက သင်ကိုယ်စားပြုသောနိုင်ငံ တစ်ခုတည်းကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
ရွေးယ်ပါ။အာဖဂန်အယ်လ်ဘာနီယန်အယ်လ်ဂျီလီယန်အမေရိကန်အင်ဒိုယန်အင်ဂိုလန်အင်ဂိုရယန်အာဂျင်တိးနားအာမေးနီးယန်သြစတြေားယန်သြစတေးလျအဇာဘိုင်ရိယန်ဘာဟာမိယန်ဘာရိုင်နီဘင်္ဂလားဒေရ်ှဘာဘာဒီယန်ဘဲလာလူရှန်ဘယ်လ်ဂျီယန်ဘယ်လီဇီးယန်ဘင်နီနီးစ်ဘာမူဒီယန်ဘူတန်နီစ်းဘိုလီဗွီယန်ဘော့စ်ဝါးနားဘရာဇီးလီးယန်းဘရိတီရှ် ဘာဂျင် အိးစ်လင်ဒါဘရူအီးယန်းဘရူနီးယန်းဘူဂ်ရီယန်ဘူခီနန်မြန်မာဘူရန်ဒီယန်းကန်ဘောဒီးယန်းကင်မရိုနီားန်းကနေဒီးယန်းကိတ် ဘားဒီးယန်းကျေမန်း အိစ်လင်ဒါအလယ်ပိုင်းအာဖရိကန်ချာဒီယန်ချီလီယန်တရုတ်အင်တီဂွာနှင့် ဘာဘူဒါဘော့စ်နီးယား နှင့် ဟီးဇဲဂိုဘီယာအီကွေတာ ဂွါနီယန်ခီရိဘတေီစေးချီးလီးဒိုမင်နီကန်ဘင်နာတူကိုလိုဘီယန်ကိုမိုရန်ကွန်ဂိုကွန်ဂိုကု အိစ့်ရင်ဒါကော့စ်တာရီကာခရိုတီယန်ကျူဘန်စီပရိစ့်ချက်ဒင်းနိစ့်ဂျေဘူတီယန်ဒိုမီနီကန်ဒတ်ခ်ျတီမောအရှေ့ပိုင်းကွာဒီရီယန်းအီဂျစ်ရှန်အမာရတီအင်္ဂလိပ်အီတရိန်းအင်စ်တိုးနီးယန်းအီသီယိုပီးယားဖါရိုစီးဖီဂျီယန်ဖီလီပီနိုဖီးနစ်ပြင်သစ်ဂါဘိုနီးဂင်ဘီယန်ဂျောဂျီယန်ဂျာမန်ဂါနာယန်ဂီဘရာတာရီယန်ဂရိဂရင်းလန်ဒီးဂရိနာဒီးယန်းဂွါမာနီယန်းဂွါတီမာလာဂွီနီယန်ဂေးယန်းနီးစ်ဟေတီယန်းဟွန်ဒူရယန်ဟွန်းကွန်းဂါဟန်ဂေရီယန်အိုင်းစ်လန်ဒီအင်ဒီးယန်းအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အီရီရ်ှအစ်ရေးအီတလီယန်းအိုဘိူရီယန်ဂျာမေကန်ဂျပန်ဂျောဒန်ကာဇာ့ကင်ရန်ကီတီတီယန်ကိုဆိုဘန်ကူဝိတ်ကီဂျီလာအိုလာဘီယန်လီဘနေီးစ်လစ်ဘီယန်လိဘျန်လိုင်းတစ်တိန်းလီဟူနီယန်လူဇင်ဘတ်ဂါမာဟီးနီးစ်မာစီဒိုနီယန်မာလာဂါစီမာလာဝီယန်မလေးရှားမယ်ဒီဘီယန်မာရယန်မယ်တီးစ်မာရှယ်လီးစ်မာတင်နီကွါ့မာတင်နီယန်မာလီတီယန်မက်စ်စီကိုမီခရိုနီးစ်မောဒိုဘန်မောနီဂါစ်ကွီးမွန်ဂိုးရီးယန်းမွန်တီနီးဂရိယန်းမွန်စီးရီးတီယန်မိုလိုကန်မွန်စီိုသိုမွန်ဇန်ဘီကန်နာမီဘီယန်နာအူရန်နီပေါဇီးလင်ဒါ အသစ်နီကောရာဂီယန်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ဂျီးယန်းနော်ဝေးဂျီယန်မြောက်ကိုးရီးယားမြောက်အီရိစ်အိုမနီပါကစ်တန်နီပါလူယန်ပါလီးစ်တီနီယန်ပါနာမားနီးယန်းပါပူအာ နယူးဂီနီယာပါရာဂူယန်းပါရူဘီယန်းမီကါရိယန် အိုင်လင်ဒါပိုလိစ့်ပေါ့တူဂီပရိဒင်းနီးပေါ့တိူုရီကန်ကွါတာရီရိုမေးနီးယန်းရိုရှားရ၀န်ဒါဆာဘာဒေါရိယန်းဆာအာရီနီစ်းဆာမွန်းဆပ် တိုမေးရီးယန်းဆောဒီ အာရေးဗျစကော့တီ့ရ်ှစဲနင်းစ်ဂလီးစ်ဆိုက်ဗေးရီးယန်းဆီရာ လိုယိုနီးယန်းစင်္ကာပူစလေ့ာစလိုဘီးနီးယန်းဆိုလိုမွန်း အိုင်စ်လင်ဒါဆိုမါနီတောင်အာဖရိကတောင်ကိုးရီးယားတောင် ဆူဒန်နီးစ်စပိန်သီရိလင်္ကာစိန့်ဟယ်လင်နီးယားစိန့်် လူဆီယန်းစတီးလစ်ဆူဒါနီးစ်ဆူရီနာမီးစ်ဆွာဇီဆွိးဒင်ဆွိဆီးရီးယန်ထိုင်ဝမ်တာဂျိခ်တန်ဇန်းနီးယားထိုင်းတိုဂိုလီးစ်တိုဂန်ထရီဒဒီးယန်ထရီစ်တန်နီးယန်တူနီးရှားတာကီတာ့မင်းတာ့မင်း နှင့် ကာအီကိုးစ်တူဘာလူယန်ယူဂန်ဒါကရေနီယန်ရူဂွါယန်ဥဇဘတ်ဘာတင်ကန်ဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်ဗင်စီတီယန်ဝါလီရှန်ဝေးရဲမဲနီဇန်ဘီယန်ဇင်ဘာဘွေနီးယန်းစီရာရီးစ်စီမရိုမပြောချင်ပါ။
တစ်ဦးထက်ပိုရှိပါက သင်သည်အများဆုံး အသုံးပြုသော တစ်ခုတည်းကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
ရွေးယ်ပါ။Afarအကျခါဇူအနြ (Аҧсуа)အာဖရိကနျးဈ (Afrikaans)အာကိနျ (Akana)အနျဟာရစခြ (አማርኛ)Aragonese (Aragonés)အာရဗေီ (العربية)အက်စမီဈ (অসমীয়া)Avaric (Авар)Aymara (Aymar)အျောဇောဘိုငျဂြောနီ (Azərbaycanca / آذربايجان)ဘကျရျှကီအာ (Башҡорт)ဘီလာရု (Беларуская)ဘူဂေးရီးယား (Български)भोजपुरीBislamaဘနျဘာရာ (Bamanankan)ဘင်ျဂါလီ (বাংলা)တိဘကျ (བོད་ཡིག / Bod skad)ဘရီတှနျ (Brezhoneg)ဘော့ဈနီးယား (Bosanski)ကာတာလနျ (Català)ခခြေငျြး (Нохчийн)Chamorro (Chamoru)ခိုစီကနျ (Corsu)ခရီး (Nehiyaw)ခကျြ (Česky)Church Slavic (словѣньскъ / slověnĭskŭ)Chuvash (Чăваш)ဝလေ (Cymraeg)ဒိနျးမတျ (Dansk)ဂြာမနျ (Deutsch)Divehi (ދިވެހިބަސް)ဒှနျကာ (ཇོང་ཁ)ဝီ (Ɛʋɛ)ဂရိ (Ελληνικά)အင်ျဂလိပျ (English)အက်စပရန်တို (Esperanto)စပိနျ (Español)အကျဈတိုးနီးရနျး (Eesti)ဘဈက်ကီ (Euskara)ပါရှနျ (فارسی)Fulah (Fulfulde)ဖငျနဈရျှ (Suomi)ဖီဂြီ (Na Vosa Vakaviti)ဖာရိုအိဈ (Føroyskt)ပွငျသဈ (Français)အနောကျပိုငျး ဖရီစီရနျ (Frysk)အိုငျးရဈ (Gaeilge)Scottish Gaelic (Gàidhlig)ဂါလာစီယံ (Galego)ဂူအာရာနီ (Avañe'ẽ)ဂူဂြာရသီ (ગુજરાતી)မနျးဇျ (Gaelg)ဟာဥစာ (هَوُسَ)ဟီးဘရူး (עברית)ဟိန်ဒီ (हिन्दी)Hiri Motuခရိုအရှေနျ (Hrvatski)ဟာအီတီအနျ (Krèyol ayisyen)ဟနျဂရေီ (Magyar)အာမနေီအနျ (Հայերեն)Herero (Otsiherero)Interlinguaအငျဒိုနီးရှား (Bahasa Indonesia)Interlingueအစ်ဂဘို (Igbo)စီခြှမျ ရီ (ꆇꉙ / 四川彝语)Inupiaq (Iñupiak)Idoအိုငျဈလန်ဒီ (Íslenska)အီတလီ (Italiano)အီနုချတီတု (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ)ဂပြနျ (日本語)ဂြာဗားနီးဈ (Basa Jawa)ဂြျောဂြီယနျ (ქართული)ကှနျဂို (KiKongo)ခီခူယူ (Gĩkũyũ)Kuanyamaခါဇါချ (Қазақша)ခလာအျလီဆပျ (Kalaallisut)ခမာ (ភាសាខ្មែរ)ကန်နာဒါ (ಕನ್ನಡ)ကိုးရီးယား (한국어)Kanuriကကျရျှမီရီ (कश्मीरी / كشميري)ကဒျ (Kurdî / كوردی)Komi (Коми)ခိုနီရျှ (Kernewek)ခရူဂဈ (Kırgızca / Кыргызча)လကျတငျ (Latina)လူဇငျဘတျကျ (Lëtzebuergesch)ဂနျဒီ (Luganda)Limburgish (Limburgs)လငျဂါလာ (Lingála)လာအို (ລາວ / Pha xa lao)လစ်သူအာနီယံ (Lietuvių)လက်ဘီအံ (Latviešu)အာလာဂါစီ (Malagasy)Marshallese (Kajin Majel / Ebon)မောငျးရီ (နယူးဇီလနျကြှနျးရှိ ပငျရငျးတိုငျးရငျးသားလူမြိုး) (Māori)မာစီဒိုနီယံ (Македонски)မလေးရာလမျ (മലയാളം)မှနျဂိုလီးယနျး (Монгол)Moldoveneascăမာရသီ (मराठी)မလေး (Bahasa Melayu)မောလ်တီဈ (bil-Malti)ဗမာ (မွနျမာစာ)Nauru (Dorerin Naoero)တောငျဒီဘီလီ (Sindebele)နီပါလီ (नेपाली)Ndonga (Oshiwambo)ဒတျချြ (Nederlands)နျောဝေး နီးနျောဈချ (Norsk (nynorsk))နျောဝေး (Norsk (bokmål / riksmål))South Ndebele (isiNdebele)Navajo (Diné bizaad)Nyanja (Chi-Chewa)OccitanOjibwa (ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ / Anishinaabemowin)အိုရိုမို (Oromoo)အိုရီရာ (ଓଡ଼ିଆ)Ossetic (Иронау)ပနျခြာပီ (ਪੰਜਾਬੀ / पंजाबी / پنجابي)ပါဠိ (Pāli / पाऴि)ပိုလနျ (Polski)ပါရျှတို (پښتو)ပျေါတူဂီ (Português)ခကျချြဝါ (Runa Simi)ရောမ (Rumantsch)ရှနျဒီ (Kirundi)ရိုမနေီယား (Română)ရုရှ (Русский)ကငျရာဝနျဒါ (Kinyarwandi)သင်ျသကရိုကျ (संस्कृतम्)Sardinian (Sardu)စငျဒီ (सिनधि)တောငျဆာမိ (Sámegiella)ဆမျဂို (Sängö)Serbo-Croatian (Srpskohrvatski / Српскохрватски)ဆငျဟာလ (සිංහල)စလိုဗကျ (Slovenčina)စလိုဗေးနီးယမျး (Slovenščina)Samoan (Gagana Samoa)ရှိနာ (chiShona)ဆိုမာလီ (Soomaaliga)အယျလျဘေးနီးယနျး (Shqip)ဆားဗီးယနျး (Српски)Swati (SiSwati)Southern Sotho (Sesotho)ဆူဒနျ (Basa Sunda)ဆှီဒငျ (Svenska)ဆွာဟီလီ (Kiswahili)တမီးလျ (தமிழ்)တီလီဂု (తెలుగు)တာဂှီချ (Тоҷикӣ)ထိုငျး (ไทย / Phasa Thai)တီဂျရငျရာ (ትግርኛ)တခ်မငျ (Туркмен / تركمن)TagalogTswana (Setswana)တှနျဂါ (Lea Faka-Tonga)တာကဈ (Türkçe)Tsonga (Xitsonga)တတာ (Tatarça)TwiTahitian (Reo Mā`ohi)ဝီဂါ (Uyƣurqə / ئۇيغۇرچە)ယူကရိနျး (Українська)အျောဒူ (اردو)ဦးဇျဘကျ (Ўзбек)Venda (Tshivenḓa)ဗီယကျနမျ (Tiếng Việt)VolapükWalloon (Walon)ဝူလိုဖျ (Wollof)ဇိုစာ (isiXhosa)Yiddish (ייִדיש)ရိုရုဘာ (Yorùbá)Zhuang (Cuengh / Tôô / 壮语)တရုတျ (中文)ဇူလူ (isiZulu)
သင်သည် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျောင်း၊ ကောလိပ် (သို့မဟုတ်) တကကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဉီးဖြစ်ပါသလား
သင်သည် ကျောင်းပြီးဆုံးခဲ့ပါ က တရားဝင်အမြင့်ဆုံးပညာရေးအဆင့်ကဘာလဲ။ ရွေးယ်ပါ။ဘွဲ့ရဲ့ (သို့မဟုတ်ညီမျှ) အဆင့်အထိမဟာဘွဲ့ (သို့မဟုတ်ညီမျှ) အဆင့်အထိပါရဂူ (သို့မဟုတ်ညီမျှ) အဆင့်အထိအခြားမပြောချင်ပါ။
ရွေးယ်ပါ။ဩစတွေးလြ (Australia)ဩစတွီးယား (Österreich)အဇာဘိုငျဂနျြ (Azərbaycan)အယျလျဘေးနီးယား (Shqipëria)အယျလျဂြီးရီးယား (الجزائر)အမရေိကနျ ဆမိုးအား (American Samoa)ယူအကျဈ ဗာဂငျြး ကြှနျးစု (United States Virgin Islands)အငျဂိုလာ (Angola)အနျဂီလာ (Anguilla)အငျဒိုရာ (Andorra)အန်တာတိက (Antarctica)အငျတီဂှါနှငျ့ ဘာဘူဒါ (Antigua and Barbuda)အာဂငျြတီးနား (Argentina)အာမေးနီးယား (Հայաստան)အာရူးဗား (Aruba)အာဖဂနျနစ်စတနျ (افغانستان)ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ (Bangladesh)ဘာဘေးဒိုးဈ (Barbados)ဘဟားမား (Bahamas)ဘာရိနျး (‏البحرين)ဘီလာရုဇျ (Белару́сь)ဘယျလျဂြီယမျ (België)ဘလိဇျ (Belize)ဘီနငျ (Bénin)ဘာမွူဒါ (Bermuda)ဘိုလီးဗီးယား (Bolivia)ဘော့စနီးယားနှငျ့ ဟာဇီဂိုဗီနား (Bosna i Hercegovina)ဘော့ဆှာနာ (Botswana)ဘရာဇီး (Brasil)ဗွိတိသြှပိုငျ အိန်ဒိယသမုဒ်ဒရာကြှနျးမြား (British Indian Ocean Territory)ဗွိတိသြှ ဗာဂငျြး ကြှနျးစု (British Virgin Islands)ဘရူနိုငျး (Negara Brunei Darussalam)ဘာကီးနား ဖားဆို (Burkina Faso)ဘူရှနျဒီ (Burundi)ဘူတနျ (ʼbrug-yul)ဘူလျဂေးရီးယား (България)ဗနှားတူ (Vanuatu)ဗာတီကနျစီတီး (Vaticano)ယူနိုကျတကျကငျးဒမျး (United Kingdom) (UK)ဗငျနီဇှဲလား (Venezuela)ဗီယကျနမျ (Việt Nam)ဂါဘှနျ (Gabon)ဂမျဘီရာ (Gambia)ဂါနာ (Ghana)ဂိုငျယာနာ (Guyana)ဂှါဒီလု (Guadeloupe)ဂှါတီမာလာ (Guatemala)ဂီနီ (Guinée)ဂီနီ-ဘီစော (Guiné-Bissau)ဂြာမဏီ (Deutschland)ဂြီဘရျောလျတာ (Gibraltar)ဂရီနဒေါ (Grenada)ဂရငျးလနျး (Kalaallit Nunaat)ဂြျောဂြီယာ (საქართველო)ဂူအမျ (Guam)ဂှနျးဇီ (Guernsey)ဂရိ (Ελλάδα)ဒိနျးမတျ (Danmark)ကှနျဂို (République démocratique du Congo)ဂြီဘူတီ (Djibouti)ဂြာစီ (Jersey)ဒီအဲဂိုဂါစီရာဒိုမီနီကာ (Dominica)ဒိုမီနီကနျ (República Dominicana)အီဂဈြ (مصر‎)အီကှဒေေါ (Ecuador)အီကှတော ဂီနီ (Guinea Ecuatorial)အီရီထရီးယား (ኤርትራ)အကျစတိုးနီးယား (Eesti)အီသီယိုးပီးယား (ኢትዮጵያ)ဇမျဘီယာ (Zambia)အနောကျ ဆာဟာရ (الصحراء الغربية)ဇငျဘာဘှေ (Zimbabwe)အစ်စရေး (יִשְׂרָאֵל)အရှတေီ့မော (Timor-Leste)အိန်ဒိယ (भारत)အငျဒိုနီးရှား (Indonesia)အီရတျ (العراق)အီရနျ (ایران)အိုငျယာလနျ (Éire)အိုကျစလနျ (Ísland)စပိနျ (España)အီတလီ (Italia)ယီမငျ (اليَمَن)ဂြျောဒနျ (الأردن)ကိတျဗာဒီ (Cabo Verde)ကာဇကျစတနျ (Қазақстан)ကမေနျ ကြှနျးစု (Cayman Islands)ကမ်ဘောဒီးယား (Kâmpŭchéa)ကငျမရှနျး (Cameroon)ကနဒေါ (Canada)ကနရေီ ကြှနျးစုကာရဈဘီယံ နယျသာလနျ (Bonaire)ကာတာ (قطر)ကငျညာ (Kenya)ဆိုကျပရပျဈ (Κύπρος)ကာဂစ်ြစတနျ (Кыргызстан)ခီရီဘာတီ (Kiribati)တရုတျ (中国)ကိုကိုးကြှနျး (Cocos (Keeling) Islands)ကိုလံဘီယာ (Colombia)ကိုမိုရိုဈ (Komori)ကှနျဂို-ဘရာဇာဗီးလျ (République du Congo)ကိုဆိုဗို (RepublikaeKosovës)ကို့ဈတာရီကာ (Costa Rica)ကို့တျ ဒီဗှာ (Côte d'Ivoire)ကြူးဘား (Cuba)ကူဝိတျ (الكويت)ကြူရေးကိုးဈ (Curaçao)လာအို (ສປປລາວ)လတျဗီးယား (Latvija)လီဆိုသို (Lesotho)လိုကျဘေးရီးယား (Liberia)လဈဗြား (‏ليبيا)လကျဘနှနျ (لبنان)လဈသူယေးနီးယား (Lietuva)လဈတနျစတိနျး (Liechtenstein)လူဇငျဘတျ (Luxembourg)မျောရီတေးနီးယား (موريتانيا)မောရဈရှ (Maurice)မဒါဂတျစကား (Madagasikara)မာယိုတေး (Mayotte)မကာအို (တရုတျပွညျ) (澳門)မကျစီဒိုးနီးယား (Македонија)မာလာဝီ (Malawi)မလေးရှား (Malaysia)မျောလျဒိုကျ (Maldives)မာလီ (Mali)မောလျတာ (Malta)မျောရိုကို (المغرب)မာတီနိချ (Martinique)မာရှယျ ကြှနျးစု (M̧ajeļ)မက်ကဆီကို (México)မွနျမာ (Myanma)မိုငျခရိုနီရှား (Micronesia)မိုဇမျဘဈ (Moçambique)မောလျဒိုဗာ (Moldova)မိုနာကို (Monaco)မှနျဂိုးလီးယား (Монгол улс)မောငျ့စဲရကျ (Montserrat)နမီးဘီးယား (Namibia)နျောရူး (Nauru)နီပေါ (नपल)နိုငျဂြာ (Niger)နိုငျဂြီးရီးယား (Nigeria)နယျသာလနျ (Nederland)နီကာရာဂှါ (Nicaragua)နီဥူအေ (Niuē)နယူးဇီလနျ (New Zealand)နယူး ကယျလီဒိုနီးယား (Nouvelle-Calédonie)နျောဝေ (Norge)ယူအအေီး (دولة الإمارات العربية المتحدة)အာလနျကြှနျး (Åland)အိုမနျ (عمان)တကျတျောမူကြှနျးမနျကြှနျး (Isle of Man)နောဖုတျကြှနျး (Norfolk Island)ခရဈစမတျ ကြှနျး (Christmas Island)ကှတျ ကြှနျးစု (Cook Islands)ပဈတျကိနျးကြှနျးစု (Pitcairn Islands)တချဈနှငျ့ကာအီကိုဈကြှနျးစု (Turks and Caicos Islands)ယူနိုကျတကျစတိတျ ကြှနျးနိုငျငံမြား (United States Minor Outlying Islands)ပါကစ်စတနျ (Pakistan)ပလာအို (Palau)ပါလကျစတိုငျး ပိုငျနကျ (فلسطين)ပနားမား (Panamá)ပါပူအာ နယူးဂီနီ (Papua Niugini)ပါရာဂှေး (Paraguay)ပီရူး (Perú)ပိုလနျ (Polska)ပျေါတူဂီ (Portugal)ပျေါတိုရီကို (Puerto Rico)ဟညှေနျ (La Réunion)ရဝနျဒါ (Rwanda)ရိုမေးနီးယား (România)ရုရှ (Россия)အယျလျဆာဗေးဒိုး (El Salvador)ဆမိုးအား (Samoa)ဆနျမာရီနို (San Marino)ဆောငျတူမေးနှငျ့ ပရငျစီပီ (São ToméePríncipe)ဆျောဒီအာရေးဘီးယား (العربية السعودية)ဆှာဇီလနျ (Swaziland)စဗိုလျဘတျနှငျ့ဂနျြမရေနျ (Svalbard og Jan Mayen)စိနျ့ဟယျလယျနာ (Saint Helena)မွောကျကိုရီးယား (북한)တောငျပိုငျးမာရီအာနာကြှနျးစု (Northern Mariana Islands)စိနျ့ဗငျးဆငျ့နှငျ့ ဂရိနဒေိုငျ (Saint Vincent and the Grenadines)စိနျ့ကဈနှငျ့နီဗီဈ (Saint Kitts and Nevis)စိနျ့လူစီယာ (Saint Lucia)ဆေးရှဲ (Seychelles)စိနျ့ဘာသယျလျမီ (Saint-Barthélemy)စိနျ့မာတငျ (Saint-Martin)စိနျ့ပီအဲရျနှငျ့ မီကှီလှနျ (Saint-Pierre-et-Miquelon)ဆီနီဂေါ (Sénégal)ဆယျဥတာနှငျ့မယျလီလျလာဆီယာရာ လီယှနျး (Sierra Leone)စင်ျကာပူ (Singapore)စငျ့မာတငျ (Sint Maarten)ဆီးရီးယား (سوريا)ဆလိုဗကျကီးယား (Slovensko)စလိုဗေးနီးယား (Slovenija)ဆျောလမှနျကြှနျးစု (Solomon Islands)ဆိုမာလီယာ (Soomaaliya)ဆူဒနျ (السودان)ဆူရာနမျ (Suriname)ယူနိုကျတကျစတိတျ (United States) (USA)ဆားဘီးယား (Србија)တာဂြီကစ်စတနျ (Тоҷикистон)ထိုငျဝမျ (臺灣)ထိုငျး (ประเทศไทย)တနျဇနျးနီးယား (Tanzania)တိုဂို (Togo)တိုကလောငျ (Tokelau)တှနျဂါ (Tonga)ထရီနီဒတျနှငျ့ တိုဘကျဂို (Trinidad and Tobago)ထရစ်စတနျ ဒါ ကှနျဟာတူဗားလူ (Tuvalu)တူနီးရှား (تونس)တာ့ချမငျနစ်စတနျ (Türkmenistan)တူရကီ (Türkiye)ယူဂနျးဒါး (Uganda)ဉဇဘကျကစ်စတနျ (O‘zbekiston)ယူကရိနျး (Україна)ဟနျဂရေီ (Magyarország)ဝေါလဈနှငျ့ ဖူကြူးနား (Wallis et Futuna)ဥရုဂှေး (Uruguay)ဖာရိုး ကြှနျးစုမြား (Føroyar)ဖီဂြီ (Fiji)ဖိလဈပိုငျ (Pilipinas)ဖငျလနျ (Suomi)ဖော့ကလနျ ကြှနျးစု (Falkland Islands)ပွငျသဈ (France)ပွငျသဈ ဂိုငျယာနာ (Guyane française)ပွငျသဈ ပျေါလီနီးရှား (Polynésie française)ပွငျသဈ တောငျပိုငျး ပိုငျနကျမြား (Territoire des Terres australes et antarctiques fr)ဟတေီ (Haïti)ဟှနျဒူးရပျဈ (Honduras)ဟောငျကောငျ (တရုတျပွညျ) (香港)ခရိုအေးရှား (Hrvatska)ဗဟို အာဖရိက ပွညျထောငျစု (Ködörösêse tî Bêafrîka)ခဒျြ (Tchad)မှနျတီနိဂရိုး (Црна Гора)ခကျြကီယား (Česká republika)ခြီလီ (Chile)ဆှဈဇာလနျ (Schweiz)ဆှီဒငျ (Sverige)သီရိလင်ျကာ (śrī laṃkāva)တောငျ ဆူဒနျ (South Sudan)တောငျအာဖရိက (South Africa)တောငျ ဂြျောဂြီယာ နှငျ့ တောငျ ဆငျးဒဝဈဂျြ ကြှနျးစုမြား (South Georgia)တောငျကိုရီးယား (대한민국)ဂမြကော (Jamaica)ဂပြနျ (日本)Eurozoneကုလသမဂ်ဂ
လူမှုရေးသိပ်ပံ၊ သတင်းစာပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်
စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့်တိရစ0x081ဆာန်ဆေးကုသရေး
ကျေးဇူပြုပြီး ဆက်ရန်အတွက်နောက်သို့ကို နှိပ်ပါ
သင့် ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို မည်သည့်နိုင်ငံတွင်အများဆုံးအသုံးချခဲ့သလဲ။
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပတစ်နိုငံထက်တူညီစွာ ရှိနေပါက မင်းဖေါ်ပြချင်ရာ တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့်မှာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ စုစုပေါင်းနှစ်မည်မျှရှိသလဲ။
မင်းရဲ့ပါရဂူဘွဲ့ရပြီးအချိန်ကစပြီး မှာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ တစ်နှစ်ထက်ပိုရှိပါသလား။
သင့်ရဲ့ပါရဂူဘွဲ့ရပြီးအချိန်ကစပြီး မှာ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ စုစုပေါင်းနှစ်မည်မျှရှိသလဲ။
အောက်တွင် ပေးထားသော ဘာသာရပ်များမှ သင်၏ အများဆုံး အနီးစပ်ဆုံးသော ဘာသာရပ်မှာ
သဘာဝသိပ်ပံ၊ သင်္ချာနှင့် စာရင်းဇယားပညာ
အင်ဂျင်နီယာ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး
စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် တိရစ0x081ဆာန်ဆေးကုသရေး
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေးသိပ0x081ပံ၏ ဘာသာရပ်ခွဲများမှ အကောင်းဆုံး သင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု လှုပ်ရှားမှုများ အမျိုးအစားမှာ-
အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာ၏ ဘာသာရပ်ခွဲများမှ သင်ပါဝင် ပတ်သက်နေသော သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု လှုပ်ရှားမှုများ အမျိုးအစားမှာ
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ သတင်းအချက်အလက်အင်ဂျင်နီယာ
သဘာဝကသိပပံ၏ ဘာသာရပ်ခွဲများမှ အကောင်းဆုံး သင်ပါဝင် ပတ်သက်နေသော သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု လှုပ်ရှားမှုများ အမျိုးအစား မှာ-
"စိုက်ပျိုးရေးသိပ0x081ပံ၏ ဘာသာရပ်ခွဲများမှ အကောင်းဆုံး သင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသော သုတေသနနှင့်
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု လှုပ်ရှားမှုများ အမျိုးအစားမှာ-"
စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့် ငါးလုပ်ငန်း
လူမှုရေးသိပပံ၏ ဘာသာရပ်ခွဲများမှ အကောင်းဆုံး သင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသော သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလှုပ်ရှားမှုများ အမျိုးအစားများ-
စီးပွားရေး နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
လူမှုရေး ဘာသာရပ်ခွဲများမှအကောင်းဆုံး သင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသော သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးအစားများ
ဝိဇဇာ (အနုပညာ၊ အနုပညာသမိုင်း၊ ဖျော်ဖြေအနုပညာ၊ ဂီတ)
နိုင်ငံတကာနှင့်ဆိုင်သော အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (သုတေသနနှ့်တီထွင်ဆန်းသစ်သောရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူမျာအပါအ၀င်)
တက္ကသိုလ် သို့်မဟုတ် သုတေသနတီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ
အလုပ်လက်မဲ့ (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူ)
အလုပ်လက်မဲ့ (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူမဟုတ်)
သင်၏ပြီးခဲ့တဲ့7ရက်အတွင်းအောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကို အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီလောက် အသုံးပြုခဲ့ပါသနည်း။
သင်သည် အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကို အချိန်ကုန်အသုံးမပြုခဲ့လျှင်, 0. (ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်)0ထက်ကြီးတဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုရိုက်ထည့်ပေးပါ။
သုတေသန / ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ရန်ပုံငွေရှာခြင်း(သို့မဟုတ်)စီမံခန့်ခွဲခြင်း
သင်ကြားရေး(သို့မဟုတ်) စွမ်းရည်တည်ဆောက်မှု (လေ့ကျင့်ရေးအပါအဝင်)
ပြည်သူ့နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (အမျိုးအစားများအားလုံး)
သုတေသန / ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမသက်ဆိုင်သောအုပ်ချုပ်မှုများ
စီမံခန့်ခွဲမှု(သို့မဟုတ်) ဝန်ထမ်း / ကျောင်းသားများ၏ ကြီးကြပ်မှုများ
အောက်ပါ နယ်ပယ်များတွင် သင်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်နှင့် ဆက်စပ်မှုများရှိပါသလား။
(လျှောက်ထားသောသူ မှ အမှန်အမှတ်အသားပြုလုပ်ပါ)
ဘယ်နှစ်ပေါင်းများစွာလောက် ဒီအခန်းကဏဍအတွက် သင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သလဲ။
သင်သည် နှစ်စုစုပေါင်းမည်မျှ သုတေသီ (သို့မဟုတ်)တီထွင်ဆန်းသစ်သူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါသလဲ။
သုတေသီ(သို့မဟုတ်)တီထွင်အဖြစ် မဟုတ်ခဲ့လျှင် (0) ရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် (0) ထက်သာကြီးတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခု ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
အောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အတူ သဘောတူညီချက် အဆင့်သတ်မှတ်ပါ။
မသက်ဆိုင် / ရွေးချယ်စရာမရှိ
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနည်းလမ်းများ / ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများရှိစေရန်အရေးကြီးပါသည်။
ရွေးယ်ပါ။ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူပါ။သဘောမတူပါ။အတန်ငယ်သဘောမတူတဘက်ဘက်မှမပါအတန်ငယ်သဘောတူသဘောတူပါသည်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူပါသည်။မသက်ဆိုင် / ရွေးချယ်စရာမရှိ
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနည်းလမ်းများနှင့်ဖြစ်စဉ်များသည် ပွင်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်ခြေလှမ်းများဖြစ်သည်မှာသေချာပါသလား။
မည်သို့ခြေလှမ်းများသည် သင်၏သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု နည်းလမ်းများ ဖြစ်စဉ်များ ပွင့်လင်း မြင်သာရန် သေချာစေသနည်း။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ်များသည်ပြည်သူလူထုကျယ်ပြန့်စွာလက်လှမ်းနိုင်သောရလဒ်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်ခြေလှမ်းများဖြစ်သည်မှာသေချာပါသလား။
သင်ကဲ့သို့ ကျယ်ပြန့်သော သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ်၏ရလဒ်များကို တတ်နိုင်သမျှ သုံးစွဲနိုင်စေရန် မည်သို့ခြေလှမ်းများရှိရမည်နည်း။
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလှုပ်ရှားမှုများမှ အများပြည်သူများ ဒေတာများ လွတ်လပ်စွာ ရရှိနိုင်စေရန် အရေးကြီးပါသည်။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလုပ်ရှားမှုများသည် ပြည်သူလူထုကိုလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များပြုလုပ်နိုင်သည့်ခြေလှမ်းများဖြစ်သည်မှာသေချာပါသလား။
သင့်သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု လှုပ်ရှားမှုများ အနေဖြင့် အများပြည်သူ ဒေတာများ လွတ်လပ်စွာ ရရှိနိုင်စေရန် မည်သို့ခြေလှမ်းများရှိစယူဘူးသနည်း။
သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ် စီစဉ်တဲ့အခါမှာ ရှုထောင့်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ခုစီခြင်းမတူကွဲပြားခြားနားမှု နှင့်အတူ (တစ်ဉီးချင်းစီ / အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပတ်သက်နေရန်) အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း မင်းရဲ့သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ်များစီမံချက်များရေး ဆွဲစဉ် မတူကွဲပြား ရှုဒေါင့်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုများရှိခဲ့ပါသလား။
သင်သည် သင်၏သုတေသနစီစဉ်နှင့် တီထွင်ဆန်းစစ်မှု အမြင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ဉီးချင်းမတူကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အတူ တစ်ဉီးချင်းစီ / အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပတ်သက်နေမှု ခြေလှမ်းများ စာရင်းပြုစုပါ။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း မင်းရဲ့သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ်တွင် ကျားမတန်းတူညီမျှမှုမြင့်တင်ရန်အတွက် ခြေလမ်းများယူခဲ့ဖူးပါသလား။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း မင်းရဲ့သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှာအလုပ်တွင် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများပါဝင်လာရန်အတွ က် ခြေလမ်းများယူခဲ့ဖူးပါသလား။
သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အလေ့အကျင့်အတွက် သင်ပါဝင် ပတ်သက်သော ကဏဍများ (ရှိပါက) ရှိပါသလား။
မူလတန်း / အလယ်တန်းကျောင်းတွင်ပညာရေး
စက်မှု / ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း
စာနယ်ဇင်း / မီဒီယာ
သင့်သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဖြန့်ဝေရာတွင် ဘယ် ကဏဍများတွင် (ရှိပါက) သင်ပါဝင် ပတ်သက်ပါသနည်း။
သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ်များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အကြောင်းကြားပေးနိုင်သောခြေလှမ်းများ ဖြစ်သည်မှာသေချာပါသလား။
သင်၏ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ် လူ့အဖွဲ့အစည်း လိုအပ်ချက် အမှာစကား သေချာစေရန် မည်သို့ခြေလှမ်းများစယူသနည်း။
ကျွနုပ်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ်များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက် စိုးရပူပန်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်မှာအ သေချာအရေးကြီးပါသည်။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ်များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်ခြေလှန်းခဲ့သည်မှာသေချာပါသလား။
သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအလုပ်များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် မည်သည့်ခြေလှမ်းများသနည်း။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလုပ်ရှားများအပေါ် အစိုးရမူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်းများမှ တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါသလား။
ဘယ်အစိုးရမူဝါဒများနှင့် စည်းမျဉ်းများက တိုက်ရိုက် သင့်ရဲ့သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အလုပ်ကို ထိခိုက်ပြီနေပါသလဲ။
ကျေးဇူးပြုပြီး စိတ်ထဲရောက်လာသော မူဝါဒများ(သို့မဟုတ်) စည်းမျဉ်းများ စာရင်းပြုစုပါ။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလုပ်ရှားများအပေါ် အဖွဲ့အစည်းများရဲ့မူဝါဒနှင့်စည်းမျဉ်းများမှ တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါသလား။
ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် စည်းမျဉ်းများက တိုက်ရိုက် သင့်ရဲ့ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အလုပ်ကို ထိခိုက်နေပါသလဲ။
လွန်ခဲ့သော၁၂လအတွင်း သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလုပ်ရှားများအပေါ် လမ်းပြပေးသောကျင့်ဝတ်စဉ်များခြေလှမ်းစခဲ့သည်မှာ သေချာပါသလား။
မသက်ဆိုင် / ဘယ်လိုမှ မမြင်
သင်ပြုလုပ်နေသော သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလုပ်ရှားများအပေါ် လမ်းပြပေးသောကျင့်ဝတ်စဉ်များခြေလှမ်းစခဲ့သည်မှာသေချာပါက မည်သည့်အဆင့်ဖြစ်သနည်း။
မင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ ၇ရက်အတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ၏ အောက်ပါအမျိုးအစားများနှင့်အတူ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုမှုများကို ဘယ်နှစ်နာရီလောက် အသုံးချခဲ့ပါသနည်း။
အောက်ပါအမျိုးအစားများနှင့်အတူ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုမှုများ မရှိခဲ့လျှင် 0. (ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်)0ထက်ကြီးတဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုရိုက်ထည့်ပေးပါ။
သုတေသနနှင့် ပတ်သက်သော အဖွဲ့အစည်းများ / ပညာရှင်များ / သုတေသီများ
သုတေသန ရန်ပုံငွေရှာဖွေသော အဖွဲ့အစည်းများ
စက်မှု / အသေးစား(သို့မဟုတ်) အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း / နိုင်ငံသားများး
အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ/ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ
ယခု သင့်အား ကုလသမဂ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ နှင့်ဆိုင်သော မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးချင်ပါသည်။ (SDGs)
သင်သည် ကုလသမဂ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များနှင့်မည်မျှအကျွမ်းတ၀င်ရှိပါသနည်း။
ရွေးယ်ပါ။အကျွမ်းတ၀င်မရှိပါ။အနည်းငယ်အကျွမ်းတ၀င်အတန်ငယ်ငယ်အကျွမ်းတ၀င်အတန်အသင့်ငယ်အကျွမ်းတ၀င်အလွန်ငယ်အကျွမ်းတ၀င်မသက်ဆိုင် / ရွေးချယ်စရာမရှိ
သင်သည် ကုလသမဂစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိကြောင်းဖေါ်ပြနေပြီး တခါတရံ SDGs ကိုရည်ညွှန်းနေပါသည်။ ထိုအကြောင်းကိုသင်ကြားဖူးပါသလား။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပေါင်း၃၀အတွင်း ကုလသမဂစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များအကြောင်းကို သင်ဘ်ာလောက်ကြားဖူးပါသလဲ။
တစ်ပတ်လျှင် ၂ကြိမ် ၃ကြိမ်
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပေါင်း၃၀အတွင်း ကုလသမဂစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များအကြောင်းကို မကြာခဏစဉ်းစားဖူးပါသလား။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စကားလုံးများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ကုလသမဂ0x081ဂ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များ အကြားရှိအမှတ်အသားများ ရွေးချယ်ပေးပါ။.
ယေဘုယျအားဖြင့် ကုလသမဂ0x081ဂ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များသည်
ကျွန်ုပ်၏ သုတေသန /ဆန်းသစ်တီထွင်မှု အလုပ်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ ကုလသမဂဂ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များသည်
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ပြန်ဖြေကြားချက် ရွေးချယ်စရာများ အသုံးပြုပြီး ရွေးချယ်မှု အသီးသီးနှင့်အတူ သဘောတူ(သို့မဟုတ်) သဘောမတူမှ သင့်သလို ညွှန်ပြပေးပါ။
ကုလသမဂဂစဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ ဦးစားပေးသင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွက် အသက်မွေးမှု လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးသင့်ပါသည်။
ကုလသမဂဂစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ကုလသမဂ0x081ဂ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်းများကို လိုက်နာပါမည်။
ကုလသမဂဂစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များသည် ရေရှည်ဘဏဍာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သာ အာရုံစူးစိုက်နေပါသည်။
မေးခွန်းများမပြီးဆုံးမီ သင်၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများပေါ်တွင် အခြေခံပြီး မေးခွန်းများအနည်းငယ် ထပ်ပြီး မေးချင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့မေးခွန်းတွေကို ပြန်လည်ဖြေကြား ကူညီမှုများကြောင့် လူမျိုးများ၏ မတူကွဲပြားမှုများကဲ့သို့ RRING (rring.eu) စီမံကိန်းကြီး၏ နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ ကမ0x081ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုတေသန ကွန်ယက်ကို တည်ဆောက်နေသော သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအတွက် ကောင်းသော အလေ့အကျင့် တစ်ခုကို ရှာဖွေတည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီနေရာထက်ကျော်လွန်ပြီးသင့်တွင်အချိန်မရှိသည်ကိုနားလည်ပါသည်။ ( ဒီလိုဆိုရင် . ကျွန်ုပ်ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ အားလုံးပြီးဆုံးရန်အတွက် ပါ။ သင့်တွင်နောက်ထပ်မေးခွန်းအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။) သို့သော်လည်း သင်နောက်ထက်၅ မီနစ်လောက်ထပ်စဉ်းစားဖြေဆိုပေးမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါမည်။
ဒီသုတေသနစစ်တမ်းမေးခွန်းများကို ဆက်ဖြေရန် ဆနဒ ရှိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ နောက်ထပ်မေးခွန်းအနည်းငယ်ကို ဆက်ဖြေနိုင်ပါသည်။
ကြုံတောင့် ကြုံခဲ/ မကြုံစဖူးဖြစ်သော
ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ သက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်များကို ခြုံလွှမ်းနိုင်သော လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု စည်းမျဉ်းမူဘောင်များဖြင့် သင့်ရဲ့သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအလုပ်များလုပ်ပါသနည်း။
ရွေးယ်ပါ။ဘယ်သောအခါမှကြုံတောင့် ကြုံခဲ/ မကြုံစဖူးဖြစ်သောတခါတရံတခါတလေမကြာခဏအများအားဖြင့်အမြဲတမ်းအားဖြင့်မသက်ဆိုင် / ရွေးချယ်စရာမရှိ
မည်သည့်စည်းမျဉ်းမူဘောင်များက သင့်ရဲ့သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအလုပ်များကို သက်ဆိုင်ရာလူမှုရေးရှုထောင့်များအတွက် လွှမ်းမိုးပါသနည်း။
သင်သည် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများအတွက် ကမ်ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဖိတ်ခေါ်မှုအပါအ၀င်နောင်အနာဂတ်တွင်ပြုလုပ်မည့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခဲရရှိရန် ဆန်ဒရှိ ပ်သလား။
ထိုသုတေသနစစ်တမ်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်ဖြေဆိုထားသောပုဂ်ဂိုလျရေးရာအချက်အလက်များကို လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး စီမံကိန်း၏အနာဂတ်နောက်ဆုံးအခြေအနေများကိုပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုပါ။
မကြိုက်ပါ။ စီမံကိန်း၏အနာဂတ်နောက်ဆုံးအခြေအနေများကိုပြုလုပ်ရာတွင် မပါဝင်ချင်ပါ။
ဒီစာမျက်နှာတွင် နောက်ပိုင်းတွင်စတင်မည့် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအတွက်ကောင်းသောအလေ့အျကင့်နဲ့ပတ်သက်သော RRING ကမ်ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်နှင့်ပါဝင်မှုဖိတ်ခေါ်မှုနှင့်အတူ လိုက်နာသင်ကြောင်းတိကျသော တစ်ဦးချင်းစီ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းကိုမေးထားပါသည်။ (rring.eu)
အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားသော သင့်နိုင်ငံ (သို့မဟုတ်)ဒေသအတွက် လူတွေကိုမြင်နိုင်သောသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု တွင်သေချာပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လူသိရှင်ကြာူအသင်းအဖွဲ့မျာ၊း၊ကွန်ယက်မျေား၊ အဖွဲ့အစည်းမျာကိုးကျေးဇူးပြုပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
ဒီစာမျက်နှာတွင် ကျွနုပ်တို့ ထုတ်ပြန်ချက်များကို သင့်ရဲ့အမြင်များကို မေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးသင့်ရဲသဘောတူညီမှုအဆင့်ကိုဖေါ်ပြပေးပါ။
ကျွန်ုပ်ရဲ့မူလဖွဲ့အစည်း ကျွန်ုပ်ရဲ့သုတေသန (သို့) တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများမှ ပြည်သူလူထုသို့ တွေ့ရှိချက်များကို ဆက်သွယ်ရန်အတွက်တာဝန်ခံမှု အားပျော့သည်။
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများဝေါဟာရစကားရပ်တွင် ယောင်္ကျား မိန်းမ အရေအတွက်တူခြင်းတစ်ခုကို ထိမ်းသိန်းရန်အရေးကြီးပါသည်။
ကျွန်ုပ်ရဲ့မူလအဖွဲ့အစည်းသည် ကျွ်နုပ်သုတေသန နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ပြည်သူလူထုသို့ဖြန့်ဝေရန်အတွက်ဆက်သွယ်ရှာဖွေမှုများကိုအားပေးသည်။
ကျွန်ုပ်ရဲ့သုတေသန (သို့) တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများမှ ပြည်သူလူထုသို့ တွေ့ရှိချက်များကို ဆက်သွယ်ရန်အတွက်တာဝန်ခံထားရပါသည်။
လူမျိုးကွဲပြားမှုသည် ကျွန်ုပ်သုတေသနအတွက် မဆီလျှော်ပါ။
ကျားမတန်းတူမှုသည် ကျွန်ုပ်သုတေသနအတွက် မဆီလျှော်ပါ။
ကျွနုပ်ရဲ့သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ပြည်သူလူထုသို့ ချပြရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည် သုတေသနအားလုံးပြီးဆုံးသွားသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ဆက်သွယ်ရန်အတွက် သုတေသနရလဒ်များကို ဂျာနယ်များတွင်ရေးသာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးမှသာလျှင်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
သင်သည် တာဝန်ရှိသောသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို စဉ်းစားသောအခါ စိတ်ထဲမည်သည့်အရာများဝင်လာသနည်း။
နောက်တဖန်ထိုစစ်တမ်းကိုဖြည့်စွက်ရန် အပြည့်အ၀အချိန်ယူပေးသောကြောင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကမ်ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုများကိုလေ့လာဆန်းစစ်ထားသောအဖြေများကို ကျွန်ုပ့်တို့ လာမယ့်နောက်ခြေလှမ်းများတွင် ပါဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုစစ်တမ်းမှ များပြားလှသော ရလဒ်များကို စီမံကိန်းကြီးရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အခမဲ့ ရရှိနိုင်အောင်ပြည့်စုံစွာတင်ပြထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မင်းရဲ့ဖြေကြားမှုများကို သိမ်းထားရန်အတွက် အောက်တွင် Submit ကို နှိပ်ပါ။